Procress Engineering Technology
Mining & Geo-Engineering
Basic Education Laboratories
Education Labs and Laboratories
Flow Meter သုံးမယ်ဆို တိုင်းတာနိုင်မယ့် Unit (2) မျိုးရှိပါတယ်။
စီးဆင်းမှုထုထည် တိုင်းတာခြင်း (Volume Flow Measurement)
စီးဆင်းမှု အလေးချိန်တိုင်းတာခြင်း(Mass Flow Measurement)
စီးဆင်းမှုနှုန်း(Flow Rate) ကို Accuracy တိတိကျကျနဲ့ သိရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်ငန်းအတွက် (အရည်၊ အငွေ့ နဲ့ ဓာတ်ငွေ့) သုံးစွဲမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှု ပမာဏများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အတိအကျသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိလာမဲ့ အကျိုးအမြတ်ကတော့ - PLC/DCS ဖြင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပြီး controlလုပ်နိုင်ခြင်း၊ Manual နည်းနဲ့တိုင်းတာခြင်းမဟုတ်တာကြောင့် အလုပ်သမားလုပ်အားခနဲ့ အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိုမိုတွင်ကျယ်စေပြီး ထုတ်ကုန်ရဲ့အကျိုးအမြတ် အသေးစိတ်တွက်ချက်နိုင်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လို သင့်လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုမဲ့ အရည်၊ အငွေ့ နဲ့ ဓာတ်ငွေ့တို့ ရဲ့ စီဆင်းမှုတိုင်းအတွက် Global Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ABB Flow Measuring Instrument များကိုဆက်သွယ်မှာယူလိုရင်တော့ Barons Industrial Technology အခုပဲဆက်သွယ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Phone - Hot Line : 09 420 15 0000, 09420 15 1111
You are here: Home >> News & Update >> Products >> News & Update >> Products >> Flow Meter
No.(5), Min Nandar Street, East Dagon Industrial Zone.
Tel : +959 420 15 1111 & +959 420 15 0000
No.127, Thiri Yadanar Shopping Complex,Naypitaw.
Tel & Fax : (95)67 421424, 421425, 421720, 421730
© Copyright 2013 Barons Industrial Technology. All right reserved.